Review – LOOFY
ကြားဖူးနေကျ ကိုရီးယားဟင်းလျာမျိုးစုံကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘယ်ဆိုင်မှာမှ မရနိုင်သေးတဲ့ အရသာမျိုးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ Bulgogi Brothers Myanmar
By The Loofy Team on 21 Apr 2020 • (0)
စာရေးသူတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ တက်စရာ သင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ လှည်းတန်းဘက်ကို ပိတ်ရက်တိုင်းလိုလို ရောက်ဖြစ်​ကြတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကိုယ်စီ သင်တန်းချိန်တွေပြီးလို့ စားဖို့သောက်ဖို့ ဆိုင်ရွေးကြရင်း ကိုရီးယားစာကြိုက်တဲ့တွေ စာရေးသူရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ဒီဆိုင်လေးကို ရောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်…… ဆိုင်နာမည်လေးကတော့ Bulgogi Brothers တဲ့ ။ ကိုရီးယားအစားအသောက်ဆို သိပ်ခံတွင်းမတွေ့တတ်တဲ့ စာရေးသူက ဒီဆိုင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာရေးသူရဲ့ တစ်ဦးတည်းအမြင်လေးတွေကို ပြန်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ Location ဆိုင်ကတော့ နာနတ်တောလမ်းထဲက SOHO Diamond Tower မြေညီထပ်မှာပါ.. နာနတ်တောလမ်းလို့ပြောလိုက်ရင်… Read More ›
သတ်သတ်လွတ်ချစ်တီးထမင်းကို ၁၅၀၀ ကျပ်ထဲနဲ့ အဝစားလို့ရတဲ့ Rangoon Indian Restaurant ဆိုတဲ့ ပန်းသေးဆိုင်
ချစ်တီးထမင်းဆိုတာ ငှက်ပျောဖက်ရွက်လေးပေါ်မှာ ထမင်းတွေ အရံဟင်းလေးတွေတင်ပြီးစားရတဲ့ ဖီလင်နဲ့ ကြွေပန်းကန်တွေ၊ ပုံစံခွက်ပန်းကန်တွေနဲ့စားရတဲ့ ဖီလင်တွေက မတူပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာကလည်း အဲ့ဒီလို ငှက်ပျောဖက်နဲ့ ချစ်တီးထမင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုတာ ကရှားတယ်လေနော်။ ဒါပေမဲ့ စာရေးသူတို့အခုတွေ့ထားတဲ့ဆိုင်ကတော့ ချစ်တီးထမင်းကို ငှက်ပျောဖက်လေးနဲ့စားလို့ရတယ်ဆိုပြီးကြားထားတော့……. စာရေးသူရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ချစ်တီးထမင်းတစ်ရက်လောက်သွားစားကြမယ်ဆိုပြီး ပြောထားကြတော့ သူတို့ကိုပါ Date ပြီး သွားစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ချစ်တီးထမင်းအပြင် တခြားဘာတွေစားခဲ့ကြသေးလဲဆိုတာ ဆက်ကြည့်ပေးနော် Location ဆိုင်က နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်မှာပဲ အောက်ထပ်ကို ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပါ။ ဆိုင်အနေအထားက လမ်းပေါ်ကနေဆို အနောက်နည်းနည်းရောက်နေတော့ သိပ်သတိထားမိဖို့မလွယ်ဘူး။ ဆိုင်ရှေ့မှာ ဆိုင်းဘုတ်လေး ထားထားပေးတော့… Read More ›
Unplugged Music အပြင် အမိုက်စား DJ တွေနဲ့ပါကဲလို့ရမယ့် အလန်းစား Vuvuzela Cafe & Beer Club
By The Loofy Team on 29 Jan 2020 • (0)
၄၇ လမ်းနားမှာ အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ Urban Asia Center ကို စားရေးသူ ဖြတ်သွားတိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီးဖွင့်ထားတာ အမြဲတွေ့နေကျပဲ ။ သောကြာနေ့တစ်နေ့မှာ စာရေးသူရဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုအလုပ်ဆင်းရင် TGIF လုပ်ဖို့ Urban Asia Center မှာ ည ၇ နာရီလောက်ဆုံဖို့ပြောထားတာ။ သူတို့ကလည်း အချိန်ကွက်တိ‌ရောက်လာတာပဲ ။ အထဲမှာ စားသောက်ဆိုင် ၊ ကဖေးဆိုင် တွေကလည်း အစုံပဲ ။ နိုင်ငံခြားက Food Street ပုံစံကို ဖြစ်နေတာ လူတွေကလည်း အများကြီးပဲ ။… Read More ›
စာရေးသူတို့သူငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ဟာ လှိုင်ဘက်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်တော့ ဗိုက်ဆာကြတာနဲ့အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာ ဘာဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးများရှိမလဲဆိုပြီး ဆိုင်ပတ်ရှာကြရင်း လှိုင်ဘူတာရုံလမ်းပေါ်က ……………… PH7BBQ & Seafood Villa ဆိုတဲ့ဆိုင်လည်းတွေ့ရော ပင်လယ်စာဆို တားမရစီးမရဖြစ်အောင်ကြိုက်တဲ့ စာရေးသူတို့အဖွဲ့ဟာ နှစ်ခါတောင် ညှိစရာမလိုခဲ့ပါဘူး။ဒီဆိုင်ကိုပဲတန်းရွေးခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဘာတွေစားခဲ့တယ် ဆိုင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို အောက်မှာဆက်ကြည့်ပေးနော်….. Location ဆိုင်က ဘယ်နားလေးမှာလည်းဆိုတော့ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်းမပေါ်မှာပါ။ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဆိုင်ကိုရှာရတာမခက်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆိုင်ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားနဲ့ ထင်သာမြင်သာရှိတယ်။ ကားပါကင်အတွက်လည်း နေရာကျယ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ကား ဒါမှမဟုတ် Taxi နဲ့သွားရင်တော့… Read More ›
ထိုင်၀မ်အစားအစာကောင်းကောင်းလေးတွေစားရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chill လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ Mr.Cow Taiwanese Food and BBQ
By The Loofy Team on 11 Jan 2020 • (0)
ပြည်လမ်းပေါ်ကဖြတ်သွားတိုင်းအမြဲတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ Mr. Cow ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကို ဝင်စားကြည့်ချင်နေခဲ့တာကြာပြီ။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူစားနေကြဖြစ်ပြီး အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ဆိုင်လေးမှာ တွေ့ဖို့ချိန်းတာက Mr. Cow ဖြစ်နေတော့ စာရေးသူရဲ့ အကွက်ထဲကို ကွက်တိဝင်သွားခဲ့တာပဲ။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ရောက်တိုင်း မစပ်စုဘဲမနေနိုင်တဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက် ဒီဆိုင်လေးမှာလည်း ဘာတွေစူးစမ်းဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ အောက်မှာဆက်ကြည့်ပေးနော်။ Location ပြည်လမ်းနဲ့ အလုံလမ်းထောင့်က Yangon International Hotel ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ Mr.Cow ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးက လမ်းဆုံထောင့် ကနေကြည့်ရင်တောင် ဆိုင်ကို တန်းမြင်နေရတာဆိုတော့ သွားရလာရခက်ခဲတဲ့ထဲတော့ မပါပါဘူး။ Hotel ဝင်းထဲရောက် တာနဲ့… Read More ›
Seafood ဟင်းပွဲတွေကို တစ်နေရာထဲမှာ အလျှံအပယ်စားလို့ရမယ့် စားတော်ပွဲ Seafood & Rakhine Cuisine
By The Loofy Team on3Jan 2020 • (0)
Seafood ဆိုအရမ်းကြိုက်တဲ့စာရေးသူရဲ့ အိမ်နားမှာမှ ပင်လယ်စာဆိုင်အသစ်ကြီးလာဖွင့်ထားတာတွေ့ထားတယ်ဆိုတော့ ပိတ်ရက်လေးမှာ သူငယ်ချင်း ၃၊၄ ယောက်လောက်ချောဆွဲပြီးရောက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ် ဒီ Seafood ဆိုင်က Social Media တွေပေါ်မှာ ပင်လယ်စာတွေထည့်ထားတဲ့ ဗန်းအကြီးကြီးတွေပြ၊ Check-in တွေဝင်ပြီး ဟိုးလေးတစ်ကျော်ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ “စားတော်ပွဲ” ဆိုတဲ့ ပင်လယ်စာမှာ စာရေးသူတို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ ဘယ်လိုတွေ မြည်းစမ်းခဲ့လဲဆိုတာ အောက်မှာဆက်ကြည့်ပေးနော်။ Location ဆိုင်ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ သင်္ဃန်းကျွန်း ရတနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတာပါ။ ရတနာလမ်းမပေါ်မှာ ရေဘဝဲပုံအကြီးကြီးနဲ့ “စားတော်ပွဲ Seafood” ဆိုပြီး စာလုံးအကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်ကြီးကို ရတနာလမ်းမပေါ်က ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူတိုင်း သတိထားမိစေမှာပါ။ ကားပိတ်တဲ့လမ်းကြောလည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်ကားပါကင်အတွက်လည်း… Read More ›
‌သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Pizza Date လေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် The Pizza Company
By The Loofy Team on 24 Dec 2019 • (0)
ဟိုတစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Myanmar Plaza မှာ ဝယ်စရာရှိတာလေးတွေသွားဝယ်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေဆုံတုန်း မုန့်လေးဘာလေးစားမယ်ဆိုပြီး The Pizza Company မှာ ဝင်စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာတွေစားခဲ့လဲ၊ ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကို ပြန်ပြီး Sharing လုပ်ပေးမယ်နော်။ Location Myanmar Plaza အပေါ်ထပ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ Myanmar Plaza မှာဆိုတော့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းဘက်ကိုရောက်တဲ့ ဘတ်စ်ကားမရှားတဲ့အတွက် သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေတယ်။ ကားရပ်ဖို့နေရာကလဲ မြန်မာပလာဇာရဲ့ကားပါကင်ရှိတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ပြီးတော့ဆိုင်ကလဲ မြန်မာပလာဇာရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်ကို တက်သွားလိုက်တာနဲ့ တန်းတွေ့ရတာဆိုတော့ ဆိုင်လိုက်ရှာနေစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်… Read More ›
European Style အပြင်အဆင်လေးနဲ့ Luxury ဆန်ဆန် Cellar Door Wine Bistro
By The Loofy Team on 12 Dec 2019 • (0)
၆ မိုင်ခွဲ Market Place ကိုသွားတိုင်း ဒီဆိုင်လေးကို သတိထားမိနေတာကြာပြီ။ ဆိုင်လေးရဲ့ Facebook Page ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့ ဝိုင်တွေလဲရတယ်၊ European Food တွေလဲရတယ်ဆိုတာတွေ့တော့ ပိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီး ဒီတစ်ခါတော့ Market Place သွားရင်းဝင်စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ စားခဲ့ရတဲ့ Menu ဆန်းဆန်းလေးတွေကို ပြန်ပြီး Sharing လုပ်ပေးမယ်နော်။ Location ၆ မိုင်ခွဲ Marketplace အပေါ်ထပ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိပြီး ဘတ်စ်ကားမရှားတဲ့အတွက် သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေတယ်။ ကားပါကင်အတွက်ကတော့ Marketplace က ကားပါကင်မှာရပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ရဲ့အနေအထားက… Read More ›
ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) နားက ၅၅၀၀ ကျပ်တန် ဟော့ပေါ့ နဲ့ မာလာရှမ်းကော Budget ဆိုင်လေး
By The Loofy Team on 10 Dec 2019 • (0)
မာလာရှမ်းကောနဲ့ဟော့ပေါ့ဆို ဈေးတန်တန်နဲ့သွားစားဖို့ Review တွေဖတ်ပြီး ရှာနေရင်း .. လူသိပ်မသိသေးတဲ့ ဆေး ( ၂ ) နားက ဆိုင်လေးကို တွေ့တာပဲ။ ချက်ချင်းဆိုသလို ကိုယ်လည်းသွားစားမိခဲ့တယ်။ဒီဆိုင်လေးက ဆေး ( ၂ ) ကျောင်းနဲ့ နီးတာမို့ ကျောင်းသား/ လူငယ် အများစုထိုင်ကြတယ်။ ဈေးလေးကလည် တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုက ဆိုင်လေးရောက်မှ သိခဲ့ရတယ်။ ဘာလဲဆို‌တော့ .. မာလာရှမ်းကောကို အရည်နဲ့ ရတာပဲ …။ ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း Menu… Read More ›
Decoration ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ Romantic ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ European Fine Dining ဆိုင်လေး Babett Yangon
By The Loofy Team on 25 Nov 2019 • (0)
အခုတစ်လော ရာသီဥတုကလည်း အေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ဝိုင်လေးသောက်ရင်း Night Life ကို ခံစားလို့ကောင်းမယ့် ဆိုင်လေးတွေကို လိုက်ရှာနေမိတယ်… ဝိုင်ကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့ European ဆိုင်လေးတွေရဲ့ Reviews တွေကို တစ်ချက်လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ လူငယ်တွေကြားမှာ နာမည်အတော်အသင့်ရပြီးသား ဒီဆိုင်လေးကို သတိထားမိခဲ့တယ်။ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမိတာက ဒီဆိုင်လေးရဲ့ စားဖိုမှူးက Michelin Star Chef တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြင်သစ်အစားအစာ ကောင်းကောင်းလေးတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ချင်တာရယ်၊ Quality ကောင်းတဲ့ ဝိုင်တွေကို သောက်ချင်တာရယ်ကြောင့် ဒီဆိုင်လေးကိုသွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလည်းဆိုတာလေးကိုတော့ ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦးနော်… Location ဆိုင်ရဲ့ location… Read More ›